“14 sano ayaan u xirnayn dembiyo aanan gelin” - BBC News Somali
“14 sano ayaan u xirnayn dembiyo aanan gelin”
Image caption Askari u dashay Shiinaha
Maxkamad ku taalla Shiinaha ayaa 1.3 Milyan oo doolar magdhow ahaan usiisay afar qof oo horey si khalad ah loogu eedeeyey in ay dil gaysteen.
2003-dii, ayaa lagu xukumay dil toogasho ah, iyaga oo loo haysto dilka nin dukaan lahaa isla markaana ay kufsadeen xaaskiisii. Muddo kadib ayaa xukunkaas laga khafiifiyay waxaana looga dhigay xabsi daa'in.
Afartan qof ayaa 14 sano xabsi ku jiray ilaa qof kale uu markii dambe sheegtay in uu isagu masuul ka ahaa dilka raggan loo haysto.
Waxay mar walba ku adkaysanyeen inaanay dembi lahayn. Waxayna sheegeen in booliisku ay ku khasbeen in ay qirtaan dembiga kadib markii jir dil loo gaystay.
Boqol maxbuus oo ka baxsatay xabsi ku yaalla Philippine
Shantii sano ee ugu danbaysay, maxkamadaha ku yaalla Shiinaha ayaa meesha ka saaray 30 xukun oo si khaldan loo qaaday. Waxaana saraakiisha garsoorku ay ku dadaalayaan in ay cadaadis saaraan booliiska si ay u keenaan cadaymo ku filan oo lagu qaado eedaysanayaasha.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaliilaya xukunada dilka ah ee lagu fuliyo boqolaal qof sanad walba. Waxayna ugu baaqeen dawladda in la iska kaashado sidii loo hubin lahaa in dadkaasi ay helaan cadaalad.